Basikety – “Mada U18”: hiditra amin’ny lalao ampahefa-dalana | NewsMada
Basikety – “Mada U18”: hiditra amin’ny lalao ampahefa-dalana
Ekipa kalaza avokoa ny tafakatra hiatrika ny dingana ampahefa-dalana, anio, eo amin’ny fifaninanam-pirenena, taranja basikety U18 tontosaina any Tsiroanomandidy. Ady mafy no natrehin’ny ekipa tsirairay vao tonga tamin’izao dingana izao.
Voarafitra ireo ekipa 16 lahy sy vavy hiatrika ny dingana ampahefa-dalana, rehefa avy niady teo amin’ny lalao ampahavalon-dalana, omaly. Misongadina ny ekipan’ny CosPN 2, ny Serasera, ny Fandrasa, ny Ascut ary ny MB2All izay samy manana solontena avokoa na ny sokajy lahy na ny avy. Ho an’ny sokajy lehilahy, nafana ny ady omaly teo amin’ny CosPN2 Analamanga sy ny BCF Vatovavy Fitovinany, nisaraka tamin’ny isa 75 noho 70. Toy izany ny lalao nifanandrinan’ny ASM Bongolava sy ny SGCI BC Sava. Lavon’ity farany tamin’ny isa 79 noho 73 ny ekipan’ny Bongolava. Nivoaka sempotra nanoloana ny CBam Analamanga kosa ny MB2All tamin’ny isa 58 noho 52 ary nahazo ny tapakila hiatrika ny ampahefa-dalana ihany koa. Ho an’ny ekipan’ny DTSC Analamanga, ny Serasera Vakinankaratra, ny Ascut Atsinanana, ny Fandrasa Haute Matsiatra ary ny Asa Analamanga, nisy ny elanelana teo amin’ny isa nanoloana ireo mpifanandrina taminy tsirairay.
Ho an’ny sokajy vehivavy indray, nahazo ny fahazoan-dalana hiatrika ny dingana manaraka ho amin’ny anio ny ekipa miisa valo nahazo ny isa ambony indrindra nandritra ny lalao fifanintsanana. Marihina fa tsy nisy ny lalao ampahavalon-dalana ho an’ny vehivavy no nahafahana namaritra izay tafakatra ka tafiditra tamin’izany ny CosPN2, ny Tamifa, ny Lucadro, ny AS Emma, ny Serasera, ny Fandrasa, MB2All ary ny Ascut.
Hanomboka amin’ny 8 ora maraina ny lalao ho amin’ny anio ao amin’ny kianja Bika Tsiroanomandidy. Hotanterahina ny asabotsy ny lalao manasa-dalana ary ny alahady izao kosa ny lalao famaranana hifanandrinan’izay ekipa mendrika nandritra ity fifaninanam-pirenena, taranja basikety U18 ity.
Valin’ny lalao ampahavalon-dalana, lehilahy
DTSC Analamanga 74 – 40 ATS Amoron’i Mania
ASM Bongolava 73 – 79 SGPI-BC Sava
Serasera Vakinankaratra 91 – 67 ESPA Matsiatra Ambony
Ascut Atsinanana 66 – 29 ABBF Matsiatra Ambony
CosPN2 Antsiranana 75 – 70 BCF Vatovavy Fitovinany
MB2All Analamanga 58 – 52 CBam Analamanga
Fandrasa Matsiatra Ambony 80 – 63 FFPRO-BCTM
Asa Analamanga 61 – 51 TMM Vatovavy Fitovinany
Ny fandaharan-dalao anio alakamisy 12 oktobra, kianja Bika
DTSC Analamanga vs SGPI – BC Sava
Serasera Vakinankaratra vs Asa Analamanga
Ascut Atsinanana vs MB2All Analamanga
Fandrasa Matsiatra Ambony vs CosPN2 Antsiranana
CosPN2 Antsiranana vs Tamifa Amoron’i Mania
Lucadro Analamanga vs AS Emma Matsiatra Ambony
Serasera Vakinankaratra vs Fandrasa Matsiatra Ambony
MB2All Analamanga vs Ascut Atsinanana